पोष्टकुमेन: फेसबुक पृष्ठहरूको लागि प्रतिस्पर्धी विश्लेषण | Martech Zone
पोष्टुमेन: फेसबुक पृष्ठहरूको लागि प्रतिस्पर्धी विश्लेषण
बुधवार, मई 28, 2014 बुधवार, मई 28, 2014 Douglas Karr
तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको सम्बन्धमा फेसबुकमा तपाईंको ब्रान्ड कहाँ र्याँक हुन्छ? सामग्री र छविहरूको प्रकारहरू के छन् जुन तपाईंको प्रतिस्पर्धीले साझा गरिरहेछन् जुन तपाईंको ब्राण्डमा सट्टामा सment्लग्नता ड्राइभ गर्दैछ तपाईंको? समुदाय तपाईंको उद्योगमा कहिले व्यस्त छ? यी प्रश्नहरू हुन् पोष्टकुमेन प्रदान गर्दछ विश्लेषण र रिपोर्टिंग को लागी।
पोष्टकुमेन तपाईंको फेसबुक उपस्थिति मा other अन्य फेसबुक पृष्ठहरू मापन गर्न अनुमति दिन्छ ताकि तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धा रणनीतिहरू संकलन र विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ - वास्तविक समयमा। सुविधाहरू समावेश:
उद्योग रिपोर्ट - प्रतिस्पर्धी मेट्रिक्स विश्लेषण गर्नुहोस् जस्तै अनुमानित पहुँच र क्लिकहरू।
मोनोकल - समाचार फीड अहिले निरीक्षण गर्नुहोस्, प्रत्येक sec० सेकेन्डमा अपडेट गरियो।
भिजुअलाइजर - सामग्री अवसरहरूको पहिचान गर्न विभिन्न मेट्रिक्स द्वारा पोष्ट क्रमबद्ध गर्नुहोस्।
रणनीति विश्लेषण - बुझ्नुहोस् कि कस्तो किसिमको युक्तिहरू प्रत्येक ब्रान्डले उनीहरूको फेसबुक मार्केटिंगमा प्रयोग गर्दैछ।
सर्वश्रेष्ठ फोटोहरू - दृश्यात्मक विश्लेषण गर्नुहोस् कुन फोटोहरूले उत्तम स engage्लग्नता प्राप्त गर्दैछन्।
पल्स - विश्लेषण गर्नुहोस् जब र के मानिसहरूले तपाईंको उद्योगमा संलग्न छन्।
पृष्ठ प्रोफाइलहरू - समग्रमा पृष्ठको मेट्रिक्स समीक्षा गर्नुहोस्।
पोष्टकुमेन रिपोर्टहरू CSV फाईलहरू र PDF हरूको रूपमा पूर्ण रूपमा निर्यात योग्य हुन्छन् ताकि तपाईं सजिलैसँग साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ।
टैग: सबै भन्दा राम्रो फोटोप्रतिस्पर्धी विश्लेषणफेसबुक विश्लेषणफेसबुक एनालिटिक्सफेसबुक प्रतिस्पर्धी विश्लेषणफेसबुक उद्योग रैंकिंगफेसबुक पृष्ठ रैंकिंगफेसबुक पृष्ठ तथ्या .्कफेसबुक प्रोफाइलहरु
BuzzSumo: शीर्षक, डोमेन, वा लेखक द्वारा शीर्ष सामग्री अनुसन्धान